Quwadaha Caalamka Oo Cambaareeyey “Xad gudubka xuquuqda aadanaha” Ee ka Dhacay Gobolka Tigray | Gaaroodi News
Quwadaha Caalamka Oo Cambaareeyey “Xad gudubka xuquuqda aadanaha” Ee ka Dhacay Gobolka Tigray
Dalalka hodanka ah ee ugu dhaqaalaha roon dunida ee ururka ay ku midaysanyihiin magiiisa loo soo gaabiyo G7 ayaa sheegay in ay “aad uga walaacsan yihiin” wararka tibaaxaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gobolka colaaddu ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya.
Dalalkaas oo ay ku jiraan Ingiriiska, Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la baadho dembiyada la soo wariyey oo cidda masuuliyadooda lehna lala xisaabtamo.
Waxay sidoo kale ku tirtirsiyeen Eritrea in ay ciidamadeeda ka garab dagaalamaya ciidamada Itoobiya ay kala baxdo gobolka Tigray.
Labada dal ciidamadooda ayaa lagu eedeeyey falal badan oo ku tumasho xuquuqda aadanaha ah.
Waxa ka mid ah rayid wadar loo laayey, kufsi, fadhataysi iyo ku gabood fal lagula kacay dad qaxootiya.
Barnaamijka baadhitaannada BBC ee Africa Eye ayaa sidoo kale helay caddaymo tibaaxaya in milatariga Itoobiya ku kacay xasuuq lagu dilay ugu yaraan 15 rag ah.
Eritrea way ku gacan saydhay eedahaas, halka ra’isal wasaaraha Itoobiya hore u beeniyey in rayid lagu laayey gobolkaas.
Dagaalka ayaa bilowday bishii Noofember markii ururka (TPLF) qabsadeen saldhig milatari oo ku yaal gobolkaas. Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed ayaa kolkaa amar ku bixiyey in la qaado hawl gal milatari oo ka dhan ah ururkaas.
Xisbiga TPLF ayaa ka talinayay gobolka, balse waxay Abiy isku seegeen waa qaabkii uu ku doonayey inuu ku kordhiyo awoodda dawladda dhexe.
Muuqaal muujinaya rag dirayska ciidanka Itoobiya gashan oo rayid laynaya.
Boqollaal rayid ah ayaa lagu dilay tobnaan kun oo kalena way qaxeen tan iyo intii uu dagaalku bilowday. Xoogagga Tigray ayaa sidoo kale lagu eedeeyay tacaddiyo xuquuqda aadanaha ah.
“Waanu dhaleecaynaynaa dilka rayidka, kufsiga, duqaynta aan loo meel dayin iyo barakicinta dadka degan Tigray iyo qaxootiga reer Eritrea” ayaa lagu yidhi warbixin uu ururka G7 soo saaray.
Warbixintu waxay intaa ku dartay “waa ma huraan in la helo baadhitaan hufan oo madax banaan oo aa dhanna u xaglinayn oo lagu sameeyo dembiyadaa la sheegay in ay dhaceen ciddii ka masuul ahayd gabood falladaa xuquuqda aadanaha lidka ku ahna waa in lala xisaabtamaa” .
Warbixintaa waxa wada jir u soo saaray wasiirada arimaha dibadda ee G7 iyo wakiilka Midowga Yurub waxaanay sidoo kale tibaaxeen walaaca ay ka qabaan “cunta yarida ka sii daraysa” waxaanay ku baaqeen in gobolkaa “si degdeg ah oo aan hakin lahayn marin loogu furo gargaarka aadamenimada”. Khariidad muujinaysa halka gobolka Tigray kaga yaal Itoobiya.
Kumanaan qof ayaa ka firxaday Eritrea sannadihii u dambeeyey sababta ugu weyn ee ay u qaxeenna waxay ahayd in ay ka cararayeen askariyeyn qasab ah oo qofku ciidanka ku jirayo muddo ilaa labaatan sano ah.
Todobaadkii hore ayaa shaqaalaha gargaarka ee Qaramada Midoobay gaadheen laba xero oo ku yaal gobolka Tigray oo ay ku jiraan qaxooti Eritrean ah oo qiyaastii tiradoodu tahay 22,000 oo qof.
Waxay sheegeen in xeryaha Shimelba iyo Hitsats gabi ahaantood ba la burburiyey oo goobihii iyo agabkii lagu fidinayey gargaarka aadamenimona la bililiqaystay